Sida loo xiriiriyo Alexa ilaa nalalka ulator Emulator.online ▷ 🥇
Nalalka casriga ah shaki la'aan waa tallaabada ugu horreysa ee guriga lagu keeno fikradda ah otomatiga guriga, taas oo ah, kontoroolka fog (xitaa iyadoo lala kaashanayo amarrada codka) ee dhammaan qalabkayaga korantada. Haddii aan go'aansanay inaan soo iibsanno mid ama in ka badan nallo caqli badan oo aan dooneynay inaan ku xakameyno amarada codka ee ay bixiyaan Amazon Echo iyo Alexa, tilmaamahan waxaan ku tusi doonaa sida loogu xiro Alexa laydhka iyo waxa amarada cod ee aan ku isticmaali karno.
Sida cutub ahaan, waxaan ku tusi doonaa nalalka casriga ah ee hubaal la jaan qaadi kara Alexa iyo Amazon Echo, si loo hubiyo inaad si sax ah ugu hagaajin karto amarrada codka iyaga.
AKHRISO: Amazon Alexa: Sida loo Sameeyo Jadwalka Jidadka Cusub iyo Amarrada Cod-bixinta Cusub
Nalalka iyo fiilooyinka ku habboon Amazon Alexa
Kahor intaanan wax ku qaban amarrada codka, waxaan u baahanahay inaan hubinno in nalalka casriga ahi ay la jaan qaadi karaan Alexa; haddii kale ma awoodi doonno inaan ku darno nidaamka oo aan ka maamulno meel fog. Haddii aan hore u soo iibsannay nalalka casriga ah, waxaan hubinaynaa haddii "ay la jaan qaadi karto Amazon Alexa" ama "ay la jaan qaadi karto Amazon Echo" waxaa lagu qeexay baakadaha ama buugga.
Haddii aynaan haysan laydh isku dheelitiran ama nalalka nalalka ah, waxaa laga yaabaa inaan ka fikirno inaan mid soo iibsanno Iftiinka istiraatiijiga ah ee Alexa, sida moodooyinka hoos ku taxan.
Philips Laydhka Hue White Lampadine LED (€ 30)
Nalka TP-Link KL110 Wi-Fi E27, wuxuu la shaqeeyaa Amazon Alexa (€ 14)
Guluubka casriga ah, LOFTer E27 RGB 7W WiFi guluubka caqliga badan (€ 16)
Guluubka casriga ah E27 AISIRER (2 gogo ', 2aad €)
TECKIN E27 midab buluug ah oo mug leh oo iftiin leh (€ 49)
Haddii, liddi ku ah, waxaan jeclaan lahayn inaan dib u isticmaalno nalalka aan horey u haysanay (bilaa iswaafajin), waxaan sidoo kale tixgelin karnaa iibsashada adapters caqli leh guluub kasta, sida midka ay bixiso Smart WiFi E27 Light soket, Aicase Intelligent WLAN (€ 29).
Ma waxaan rabnaa inaan la qabsano nalalka qolka fadhiga ama qolka jiifka (kuwa leh fiilooyin gaar ah)? Xaaladdan oo kale, waxaan ku badbaadin karnaa iibsashada nalalka casriga ah annagoo xoogga saareyna halkii saldhigyada Wi-Fi ee smart, sida kuwa hoos ku taxan.
Presa Sirdoonka WiFi Smart Plug Telecomando ZOOZEE (€ 14)
Bixinta Philips Hue (€ 41)
Qalabka TP-Link HS110 Wi-Fi oo leh kormeer tamar (€ 29)
Smart Plug WiFi Smart Plug Power Monitor fiilo (4 gogo ', € 20)
Dhammaan alaabooyinka ku taxan waxay la jaan qaadayaan Alexa, waxa kaliya ee aan sameyno waa inaan ku xirno shabakadeena Wi-Fi (iyadoo la raacayo tilmaamaha ku jira buugga isticmaalaha), adeegso barnaamijyada kala duwan si aad u habeysid marinka fog (waxaa nala weydiin doonaa inaan abuurno xisaab cusub ) iyo, kaliya ka dib aasaaskan aasaasiga ah, ma sii wadi karnaa qaabeynta Alexa.
Ku xir nalalka Amazon Alexa
Ka dib markaad isku xirto nalalka casriga ah (ama lagugula taliyay ama adapters) oo aad si fiican ugu xirnaato shabakadda Wi-Fi ee guriga, aan helno taleefan casri ah oo aan ku rakibno barnaamijka Amazon Alexa, oo laga heli karo Android iyo macruufka.
Kadib markaad soo degsato barnaamijka, bilow oo ku qor koontadayada 'Amazon'. Haddii aynaan wali haysan koonto Amazon, waxaan si dhakhso leh ugu abuuri karnaa barnaamijka ama bogga rasmiga ah.
Ka dib markaad gasho, waxaan gujineynaa Qalabka Midigta hoose, xulo badhanka + midigta sare oo taabo Kudar aaladda. Shaashadda cusub waxaan dooraneynaa ikhtiyaarka iyadoo kuxiran nooca aaladda loo qaabeeyo: Nalalka nalka si loo hagaajiyo guluubka casriga ah; Saxaafadda haddii ay dhacdo in aan gacanta ku hayno fiilo smart ama Beddel haddii aan u dooran lahayn adabtarada Wi-Fi-yada nalalka keligood ah.
Hada aan guda galno Waa maxay summaddu ?, waxaan doorannaa sumadda qalabkeenna, waxaan doorannaa badhanka Sii wad ka dib waxaan taabannaa curiyaha U oggolow isticmaalka; hadda waxaa nala weydiin doonaa aqoonsiga helitaanka adeegga la xiriira nalalka, saldhigyada ama furayaasha la soo iibsaday (sida lagu arkay cutubkii hore). Markaad gasho aqoonsiyada saxda ah, si fudud u xulo Xiriiriyaha hada in lagu daro xakamaynta qalabka gudaha Alexa.
Haddii sumadda qalabku soo muuqato, marwalba waan taaban karnaa Kuwa kale oo gacanta ku habee qalabka, si ay uga dhex muuqato Alexa. Kadib isku xirka, waxaan kaliya dooran doonaa magaca aaladda, qolkee ama qeyb aan ku dhejineyno (Jikada, Qolka fadhiga, iwm.) Oo guji Dhameeyay.
Cutubka soo socda waxaan ku tusi doonaa sida loo isticmaalo amarrada codka si loogu xakameeyo nalalka Alexa.
Codku wuxuu amraa in la maareeyo nalalka
Ka dib markii lagu daro dhammaan aaladaha barnaamijka Alexa, waxaan u adeegsan karnaa amarada codka barnaamijka Alexa ama Amazon Echo oo lagu sameeyay isla xisaabta Amazon ee loo isticmaalo dejinta.
Waa kuwan liistada amarrada aan u adeegsan karno inaan ku maamulno nalalka Alexa:
"Alexa, shid nalalka [stanza]"
"Alexa, daar [qalabka nome]"
"Alexa, daar dhammaan nalalka qolka fadhiga"
"Alexa, dami dhammaan nalalka guriga ku jira"
"Alexa, daar nalalka qolka fadhiga 6-da maqribnimo"
"Alexa, i toosi 8-da fiidnimo oo nalka oo dhan daar guriga"
Kuwani waa qaar ka mid ah amarrada codka ee aan isticmaali karno marka nalalka loo dhigo Alexa. Wixii macluumaad dheeraad ah, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aqriso hageheena Astaamaha Amazon Echo, waxa loogu talagalay iyo waxa loogu talagalay.
Qeyb muhiim ah oo ka mid ah otomaatiga guriga mustaqbalka waa joogitaanka nalalka casriga ah ee lagu xakameyn karo iyada oo loo marayo kaaliyeyaasha codka sida Amazon Alexa, kaas oo kuu oggolaan doona inaad xakameyso ugu badnaan qalabka iswaafajiya.
Haddii aan dooneyno inaan isla isbeddel ku sameyno Google Home (oo markaa ka faa'iideysanno Kaaliyaha Google) waxaan kugula talineynaa inaad aqriso maqaalkeenna Maxuu Guriga Google sameyn karaa: kaaliyaha codka, muusikada iyo otomaatiga guriga. Ma hubo waxa laga kala dooranayo Amazon Alexa iyo Google Home? Waxaan ka heli karnaa jawaabo badan su'aalahaaga falanqeynteenna qoto-dheer. Alexa ama Guriga Google? isbarbardhigga udhaxeeya kuwa ugufiican ee hadlaa iyo kuwa ugu caqliga badan.
Waa maxay FWA macnaheedu, beddelka fiber ee internetka dhakhsaha badan?